Wararka Maanta: Talaado, July 31, 2012-Ciidammo ka tirsan kuwa Dowladda KMG Soomaaliya oo Xalay dhac baahsan ka geystay Degmada Afgooye
Saraakiil ka tirsan ciidamada DKMG ah ayaa waxay saxaafadda u sheegeen in dhaca uu ahaa mid baahsan ayna ciidamada dowladda ka geysteen xaafado dhinaca waqooyi kaga yeella degmada Afgooye.
"Dhacu wuxuu ahaa mid saf-ballaaran ah waxaana geystay ciidammo ka tirsan kuwa dowladda KMG ah," ayaa laga soo xigtay saraakil ka tirsan kuwa dowladda oo diiday inay magacyadooda sheegaan sababo la xiriira inaan loo ogoleyn inay saxaafadda u gudbiyaan warkan.
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo shalay booqday degmada Afgooye ayaa wuxuu cabasho ku aaddan dhac ay ciidammadu ka geystaan degmadaas ka dhageystay waxgaradka, iyadoo guddoomiyaha degmada Afgooye uu ka dalbaday madaxweynaha in wax laga qabto dhibaatada shacabka loo geysanayo.
"Dadweynaha ku nool degmada Afgooye waxaan ka raalli-gelinaynaa dhibaatadii loo geystay, saraakiisha ciidamadana waxaan faraynaa inay arrintaas ka hortagaan," ayuu yiri Shariif Sheekh.
Abaanduulaha ciidamada xoogga ee DKMG ah, Jen. C/kariin Yuusuf Aadan Dhego-badan oo goobta ka hadlay shalay ayaa sheegay inay wax ka qabaayaan dhaca ay ciidamada dowladdu ka geysanayaan degmada Afgooye, isagoo si buuxda u sheegay in lagu wargeliyay in falalkaas haddii ay soo laabtaan uu madaxiisa u maqan yahay.
Degmada Afgooye ayaa waxay gacanta ugu jirtaan ciidamada dowladda KMG ah iyo kuwa AMISOM oo Xarakada Al-shabaab kala wareegay dhammaadkii bishii May ee sannadkan, waxaana tani iyo xilligaas ka dhacayay falal ammaan-xumo oo qaarkood lagu dilay dad rayid ah.